विशेष – Page 5
(Scotland Census 2022) जनगणनामा नेपाली पहिचान खुल्ने गरी सहभागी हुन नेपाल स्कटलैण्ड एसोसिएसनको अपील।
एडण्वरा, स्कटल्याण्ड। नेपाल स्कटलैण्ड एसोसीएसनले मार्च २० स्कटलैण्डमा हुने जनगणनामा नेपाली पहिचान खुल्ने गरी सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ। पहिचान खुल्ने गरी सहभागी हुँदा बेलायतको नेपाली समुदायको वास्तविक तथ्यांक रहनुका साथै सामुदायिक...
ज्योतिष तथा नायक हरिहर र नायिका निता ढुंगाना विवाह बन्धनमा बाधिदै
काठमाडौं-ज्योतिष तथा नायक हरिहर अधिकारी र नायिका निता ढुंगाना विवाह बन्धनमा बाधिने भएका छन् ।हरिहर र नीताले २०७९ सालमा विवाह गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । लामो समय देखी प्रममा रहेका भनिएको...
महँगी र बेरोजगारी कारण खर्च धान्न आफ्नै शरीर बे’च्न बा’ध्य छन् युवायुवती
काठमाडौं । “मैले जे गरिरहेकी छु त्यसप्रति म लज्जित छु, तर मसँग के विकल्प छ र?” तेहरानकी एकल महिला नेदा भन्छिन्। दिनमा उनी केशविन्यासको काम गर्छिन् तर हातमुख जोड्ने मेलो गर्न राति...
‘‘मर्दांगी’को परीक्षामा पास हुन नसक्दा पुरुषले आत्महत्या समेत गर्छ’, कमला भासिन
अमिर खानः यो मर्दांगी (पुरुषत्व) को जुन सोच छ हामीमा, त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? कमला भासिनः अत्यन्त भारी मनका साथ म भन्छु र त्यसो भन्नुपर्दा म आफैँलाई ग्लानीसमेत हुन्छ। पितृसत्ता स्वयं पुरुषका लागि...
थेसिस लेख्ने तरिका ?
थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा विद्यार्थीहरु अन्यौलमा हुन्छन्। नियमित कक्षा लिएका हुदैनन्। कसरी गर्ने भन्ने विद्यार्थीलाई जानकारी नहुँदा वर्षाैंदेखि अधुरै हुन्छ। विद्यार्थीको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले फेसबुकमार्फत थेसिस लेख्ने तरिका...
एनआरएनए स्कटल्याण्ड राज्य परिषदद्वारा नेपाली राजदुतलाई स्वागत तथा स्थानीय जनचासोका विषय सम्वन्धि बिस्तृत छलफल।।।
एनआरएनए स्कटल्याण्डका प्रतिनिधिहरु अध्यक्ष काशीराम भन्डारी (श्रीमती मिरा देवी भण्डारी), उपाध्यक्ष उज्जल कार्कि, कोषाध्यक्ष शर्मीला ढकाल द्वारा यहि मार्च १५, २०२२ का दिन लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा एक विशेष भेट गरि नबनियुक्त...
होलीसँगै भक्तपुरमा स्टन्ट शोको रौनक
भक्तपुर । मोटरसाइकल उडाउने साहसिक खेलसहितको होलीमा बिहीबार भक्तपुरेवासी रमाएका छन् । सल्लाघारीमा आयोजित ‘होली फ्री स्टाइल स्टन्ट एण्ड डिजे शो इभेन्ट्स’मा सयौं दर्शकले निःशुल्क रुपमा मनोरन्जन लिएका छन् । हिडन एक्सन स्टन्ट एकेडमीको...
होलीमा रङ खेल्दा के गर्ने ? के नगर्ने ?
काठमाडौं । बिहीबार उल्लासमय वातावरणमा होली पर्व मनाइँदैछ । यस दिनमा आफन्त तथा मन मिलेका साथीबीच प्राकृतिक रूपको अबिर तथा पानीको पिच्कारी एक आपसमा छ्यापाछ्याप गरिन्छ । यो पर्व मनाउँदा आफ्नो छाला...
वैशाख ३० को स्थानीय चुनावबारे जान्नैपर्ने कुराहरू
काठमाडौं। राजनीतिक परिस्थितिमा गुणात्मक फेरबदल आएन भने २०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्कापक्की छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेकाले दलहरू निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। यसअघिको स्थानीय...
छापामार बेश्या नै हो ?
कुरा २०५९/६० तिरको हो। बर्षाको याम थियो एक डेढ् सय जनसेनाहरू लगभग त्यतीकै संख्यामा घाईतेहरूबोकेर आए। घाईतेमा महिला पुरूष सरी थिए। बोक्नेहरू पनि महिला पुरष बराबर थिए। पुरूष छापामारलेमहिला घाईते बोकेको स्वभाविक...
Previous 1234567 8910 … 215 Next